Comning Events – Banana Events
LOCATION: PANSURIYA ART GALLERY
First Time Ever in Yangon
Early Bird: Local – MMK 15000| Int’l 20000 til 2nd NOV
Late Bird : Local- MMK 20,000| Int’l 25,000
Ticket included free flow beer from9to 11 pm
50% discount to Silent Disco Outdoor Cinema if you hold Silent Party ticket
Get your both tickets at Pansuriya အနုပညာဆုံမှတ် or Myanpwel online ticket https://myanpwel.com/event/detail/2204/silentdisco-rave-party
Silent Disco Yangon >> The concept of “Silent Disco” is an original and revolutionary approach to entertainment at events and parties. Three DJs playing three different styles of music allow guests to flick between the different channels on their head- sets and dance to whatever music they prefer. There could be disco grooves on the green channel, electronic dance music on the blue channel, and rock music on the red channel – it’s up to you to decide what you want listen to.
What makes Silent Disco unique is our customised Silent VIBES headsets which are designed with integrated LED lights which, depending which channel you are listening to, light up and glow in blue, green or red, turning the dance floor into an immersive and interactive light installation.
Our headsets provideatop-quality listening experience. Once you’re wearing them, it feels no different to being inaregular nightclub – except that you can switch between three channels, control the volume and even take them off and haveachat with your friends if you like – without having to shout over loud music.
ထူးခြား‌‌‌ေသော နားကြပ်များ ‌ပါတီအပေါက်၀တွင် ‌‌‌‌ဝေပေးပါမည်။ တစ်ပြိုင်တည်းမှာပဲ DJ သုံးဦးမှ မတူညီသော သီချင်းများကိုပြိုင်တူတီးကြပါမယ်။ ထို မတူညီသော သီချင် သုံးမျိုုးအား သင်ရဲ့ ထူးခြား‌‌‌ေသော နားကြပ် များမှာ Channel အလိုက်ပြောင်းကာ မိမိစိတ်ကြိုက် သီချင်းလိုင်းအား‌ အချိန်မရွေး ‌‌Channel ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
Channel ဆိုသည်မှာလည်း အရောင်သုံးမျိုးအလိုက်ခွဲထားပါတယ် အပြာ၊ အစိမ်း၊ အနီဟူ၍ဖြစ်သည်။ အရောင်တစ်မျိုးခြင်းစီသည် သီချင်း တစ်လိုင်ချင်းစီနှင့် ဆက်နွယ်ကာ မိမိနှစ်သက်သော ကာလာသီချင်းလိုင်းသို့‌‌ေပြောင်းယူပြီး အရမ်းကို quality ‌ကောင်းမွန်လှသော အဆင့်အတန်းမြင့်သော ပါတီပွဲ မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာ သီချင်း ‌ရွေးချယ်နားဆင်ရင်း ဤထူးခြားလှသော မြန်မာပြည်တွင်ကျင်းပမည့် Silen Disco ပွဲအတွက် လတ်မှတ်များ အကန့်အသတ်ရှိတာမို့ခုပဲ ဝယ်ယူလိုက်ပါ ဖုန်း 09785804162
လတ်မှတ်များတွင် ဘီယာ အကန့်အသတ်မရှိ ည 9-11ထိ ‌သောက်နိုင်ပါသည်
SILENT DISCO OUTDOOR CINEMA
LOCATION: BACKPACKERS HOSTEL ROOFTOP
15,000KS INCLUDING DINNER + WINE + COCKTAIL + POP-CORN + COZY PLACE
50% OFF IF YOU HOLD SILENT RAVE PATY ON 23 NOVEMBER 2019
for more info: Events ticket link